Jawaari oo ku biiray Shirka Musharixiinta | KEYDMEDIA ONLINE
Waxaa sii kordhaya Mas'uuliyiinta tageysa Shirka ka socda Jazeera hotel, oo looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa ku biiray Shirka Musharixiinta wali uga socda Jazeera hotel, oo ku yaalla kasoo horjeedka Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Jawaari waxaa kusoo dhaweeyay madasha Sheekh Shariif iyo Musharixiin kale, isagoo sheegay inuu taageersan yahay dedaalka socda ee lagu diidan yahay hanaanka musuq-maasuqa ku jira ee doorashadda 2020-21.
Horey waxaa Shirka ugu biiray Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi iyo ku xigeenkiisa Abshir Bukhaari, iyadoo sidoo kale xalay ay goobta shirka tageen Gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Mursal iyo Muudey.
Shirka ayaa socda maalintii 4aad, waxaana la kordhiyay mudada oo markii hore ahayd 3 maalin, balse la ballaariyay si looga qeybgaliyay dhamaanka qeybaha bulshadda iyo siyaasiyiinta kale ee talooyinka iyo fekerka ku biirinaya Musharixiinta.
Dalabka Musharixiinta ayaa ah in la bedelo gudiyadda la sameeyay, islamarkaana la dhiso kuwa madax-banaan, oo dhex-dhexaad u noqon kara dhamaan dadka u tartamaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya Febuary 8, 2021.